(L) စိတ်ကျဝေဒနာ၏မျက်နှာနှစ်ဘက် - လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်ကြွက်များတွင်လက္ခဏာများကိုပိတ်ထားသော်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်းများ - dopamine (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ် Porn
(L) စိတ်ကျရောဂါ၏နှစ်ခုမျက်နှာများ - နှစ်ခုလေ့လာမှုများကြွက်တွေမှာရောဂါလက္ခဏာတွေပိတ်ထားပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက် ways- dopamine (2012) တွင်
စိတ်ကျရောဂါ၏နှစ်ခုမျက်နှာများ - နှစ်ခုလေ့လာမှုများကြွက်တွေမှာ, ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်းလက္ခဏာတွေပိတ်
Ed က Yong by | ဒီဇင်ဘာလ 12, 2012
စတန်းဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်ကဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်မောက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည် 10 ရက်သတ္တပတ်သည်အပြောင်းအလဲမြန်အိပ်စက်ခြင်းပုံစံများဖို့, အစားအစာသို့မဟုတ်ရေမရှိဘဲအကြိမ်ကြိမ် မှစ. , ကျိန်းစပ်နေတဲ့စီးရီးကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ အခုတော့သူ့ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုအမြီးတက်ခူးဖြစ်ပါတယ်နိမ့်သောအခါကမှလွတ်မြောက်ရန်အနည်းငယ်ကြိုးစားမှုစေသည်, ထိုသို့အသစ်သောနေရာများလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကြိုးစားပါဘူး။ ဒါဟာကဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကို liquid- တစ် sugary ထံမှ SIP ဖို့လည်းလျော့နည်းဆန္ဒရှိမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့်ပျြောမှေ့စလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့်ဒီထက်ပျော်မွေ့ရရှိသွားတဲ့။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်၏စိတ်ကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ရန်ရန်လွယ်ကူဘယ်တော့မှမဖြစ်, သို့သော်ဤ mouse ကိုရှင်းလင်းစွာစိတ်ကျရောဂါ၏ဂန္ထဝင်ရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းက, ကေး Tye နှင့် ဂျူလီ Mirzabekov အလင်းတစ် flash ကို၎င်း၏ဦးနှောက်ကို-၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုသက်ဝင်စေနိုင်အောင် mouse ကိုပြောင်းလဲ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA), ဦးနှောက်၏အောက်ခြေအနီးနှင့် midline နီးကပ်။ တစ်ဦးကအလင်း၏ပေါကျကှဲနှင့်မောက်ရဲ့အပြုအမူနီးပါးချက်ချင်းပြောင်းလဲစေပါသည်။ ဒါဟာဒို့အရေးကျင်းပသည့်အခါ, ကပွင့်လင်းသောဒေသများတွင်စူးစမ်းနှင့်၎င်း၏ချိုမြိန်သွား regains ရုန်းကန်။ တစ်ဦးကအလင်း၏ပေါကျကှဲ, နှင့်၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွား။
သို့သော်တိုင်းပြည်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်, ဆေးပညာ၏သိနာတောင်ပေါ် School မှာ, Dipesh Chaudhury နှင့်ဂျက်စီကာ Walsh လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှတူညီသောအရာလုပ်နေတာ။ အလင်းလည်းသူတို့ရဲ့ VTA အာရုံခံအပေါ်ကိုပြောင်းနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့ကြွက်တွေ, အလားတူလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤကြွက်ကြီးစိုး, ရန်လိုပြိုင်ဘက်နှင့်အတူလှောင်အိမ်ထဲမှာထည့်ထားခံရစိတ်ဖိစီးမှု-10 ရက်ပေါင်းတစ်ဦးတိုတောင်းပေမယ့်ပိုပြီးပြင်းထန်ပုံစံကြံ့ကြံ့ခံပါပြီ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရရှိလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှု၏, ထိုသူအချို့တို့သည်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ။ အခြားသူများကပိုပြီးဒဏ်ခံဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Chaudhury နှင့် Walsh ၏ VTAs ရောက်ကြပါ၏အခါ, ဤ ကြွက်, ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောသူတို့ကိုအသွင်ပြောင်းဒဏ်ခံတစ်ဦးချင်းစီ။
နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများဦးနှောက်၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းအတွက်အာရုံခံဖြစ်ပေါ်ဖို့အတူတူနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြု ... နှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတယ်။ Tye နှင့် Mirzabekov ရဲ့စမ်းသပ်မှုများတွင်စိတ်ဓာတ်ကျကြွက်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အပြုအမူပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ Chaudhury နှင့် Walsh ရဲ့လေ့လာမှုမှာဒဏ်ခံကြွက်ပြသ နောက်ထပ် စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ။
နှစ်ဦးစလုံးသင်းပုံဆန့်ကျင်ရလဒ်များကြွက်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့စိတ်ဖိစီးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်မလုံခြုံမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါ Tye ရဲ့တိရိစ္ဆာန်များလူသားတစ်ဦးအစွမ်းသတ္တိများကဲ့သို့နာတာရှည်အပျော့စားစိတ်ဖိစီးမှု, တွေ့ကြုံ။ Chaudury နှင့် Walsh ရဲ့ကြွက်တွေကပို mugged တဲ့သူတစ်ဦးဦးနဲ့တူသောအရာတစ်ဦးတိုတောင်းအချိန်ကျော်ပြင်းထန် "လူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်" စိတ်ဖိစီးမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားခြားနားအတွေ့အကြုံများကိုဦးနှောက်၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ဒါလုပ်ပါ။ "လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝသမိုင်းရှိပါတယ်, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာတွေ့ကြုံ" ဟုဒုတိယလေ့လာမှုကိုဦးဆောင်သူကိုသူ Ming-ဟူဟန်ကပြောပါတယ်။ "သင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနှစ်ဦးအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေနှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနေအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်နိုင်သည်။ "
ဤရလဒ်သည်စိတ်ကျရောဂါ၏ရှုပ်ထွေးသဘောသဘာဝ underscore ။ ဒါဟာသူတို့အတူတူဧရိယာလွှမ်းမိုးနှင့်ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုကအလားတူ constellation ထုတ်လုပ်နေလျှင်ပင်ဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်းများအတွက်ဦးနှောက်အပေါ်ပြုမူနိုင်ကြောင်းများစွာသောအလားအလာအကြောင်းတရားများရှိနေသည်။
စိတ်ကျရောဂါအဘို့အဘယ်သူအားမျှမ-size-ကိုက်ညီတဲ့-အားလုံးကုသမှုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစရှင်းပြနိုင်ဘူး။ "ပင်အထိရောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများရုံများအနက်အချို့သာလျှင်အလုပ်လုပ်နှင့်အချို့သောကုသအချို့သောလူနာတွေအတွက်လှပအလုပ်လုပ်ပေမယ့်တခြားသူတွေကိုကပိုဆိုးစေ," ယခုနည်းပညာအဘို့အ Massachussetts Institute ကသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းတက်အကြီးအကဲ Tye ဆိုပါတယ်။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants အပေါ်သုတေသန ... ကောင်းစွာ ... အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါးဆယ်စုနှစ်သမိုင်းနေသော်လည်းအနည်းငယ်တိုးတက်လာသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကြပြီ။ "အတိတ်ကာလတဝက်ရာစုကျော်မျှစစ်မှန်စွာသဲတိုးတက်မှုကိုဖန်ဆင်းထားသည်" ပြောပါတယ် ဂလ Yadid ဣသရေလအမျိုး၌အဘား-Ilan University မှ။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြွက်တွေ၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကြပေမဲ့, ဤအသစ်ကလေ့လာမှုများ, သစ်ကုသဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်အများအပြားသဲလွန်စပေး။ သူတို့ကရောဂါလက္ခဏာတွေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသောဦးနှောက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုအတိအကျရှာရန်, သူတို့လက္ခဏာတွေအလားအလာအလွန်လျင်မြန်စွာပြောင်းပြန်နိုင်ပြပါ, သူတို့ပါဝင်ပတ်သက်သောဓာတုပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။
စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏လက်ရှိလှိုင်းအများစုဟာ, Prozac ကဲ့သို့အနိမ့်အဆင့်ဆင့်စိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောအခြေခံပေါ်မှာ, ဦးနှောက်ဓာတု serotonin ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ ဒါပေမဲ့ ဒီယူဆချက်လုံးဝလက်ျာဘက်မဖွစျနိုငျ။ တစ်ဦးက start အဘို့, ဒီဆေးတွေကိုလူတိုင်းအဘို့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ သူတို့လုပ်ပေးသောအခါ, သူတို့အတွက်ကန်ဖို့လပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဝါးများအလုပ်လုပ်ကြသည်မှန်လျှင်သူတို့ serotonin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နာရီအတွင်းအလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ထိုသို့အဖြစ်သူတို့သွယ်ဝိုက်သရုပ်ဆောင်နေနဲ့တူပါကကြည့်ရှုသည်။
ကျနော်တို့ပိုကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦး implants device ကိုလျှပ်စစ်ဦးနှောက်ကိုလှုံ့ဆျောဘယ်မှာနက်ရှိုင်း-ဦးနှောက်ဆွနှင့်အတူလေ့လာမှုများ, စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေအလွန်လျင်မြန်စွာပြောင်းပြန်နိုင်ပြသခဲ့ကြသည်။ အလားတူပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူဆိုသော်ငြား ketamine တူသောအချို့မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါကြောင့်အလွန်လျင်မြန်စွာဦးနှောက်ထဲမှာလက္ခဏာအကျိုးသက်ရောက်မှုရဖို့ရှင်းလင်းစွာဖြစ်နိုင်သောင်; ဒါကြောင့်ကိုယ့်လက်ျာဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ သူတို့အားဆားကစ်ပု VTA ၌၎င်း, အထူးသအနီးအနားရှိနျူကလိယ accumbens NA () မှ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုနေထိုင်တူသောနှစ်ခုအသစ်သောလေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ကြည့်ရှုသည်။
အဆိုပါ VTA secrete ကြောင်းအာရုံခံများအတွက်အချက်အချာဖြစ်ပါသည် dopamineဆုလာဘ်၏ခံစားချက်များကိုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မယ့်အကြောင်း, အခြားဦးနှောက်ဓာတု။ Dopamine စိတ်ကျရောဂါသုတေသနအတွက်အတော်လေးသစ်ကိုကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအမျိုးမျိုးအဖွဲ့များ VTA နှင့် NA ဆက်သွယ်ထားသော dopamine အာရုံခံခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေထုတ်လုပ်ပါပြီ။
Tye နှင့် Chaudhury ရဲ့အုပ်စုများထိထိရောက်ရောက်အတူတူပင်ပြုမိသော်လည်း, မည်သူမဆိုယခင်ကစီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်ထက် ပို. တိကျစွာနှင့်အတူပါပွီ။ သူတို့ရဲ့ Ace ကဒ်လို့ခေါ်တဲ့ technique ကိုခဲ့သည် optogeneticsသူတို့ကိုဖိုင်ဘာကထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြု Light-အထိခိုက်မခံပရိုတိန်းနှင့်အတူအာရုံခံ implants ရာ။ ဒီပရိုတိန်းနှင့်အတူသိပ္ပံပညာရှင်များအလင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်နှင့်သို့မဟုတ်ပိတ်အာရုံခံလှည့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကဦးနှောက်၏တိကျသောစိတျအပိုငျး, ဒါမှမဟုတ်ဆဲလ်များ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမတိုင်မီကဲ့သို့ဦးနှောက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ပါတယ် (နှင့်က technique ကိုရဲ့တီထွင်သူတစ်ဦးကြောင့်အံ့သြစရာမရှိပါရဲ့ - ကားလ် Deisseroth - နှစ်ဦးစလုံးစာတမ်းများအပေါ် features တွေ) ။
Tye ရဲ့အုပ်စုတစ်စုကိုချက်ချင်းနှင့် reversibly သူတို့စိတ်ကျရောဂါခဲ့ကြသည်လျှင်အဖြစ်ပြုမူသာမန်ကြွက်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပထမဦးဆုံးတိတ်ဆိတ် VTA အာရုံခံမှ optogenetics ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးဘက်စ် ( "phasically") ၌တူညီသောအာရုံခံမီးကိုဖန်ဆင်းသည့်အခါပြောင်းပြန်, သူတို့ရစေရန်ပတ်အလေးပေးခဲ့ကြောင်းကြွက်များတွင်ရောဂါလက္ခဏာကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်။
ဟန်ရဲ့အုပ်စုသည်နေ့ရက်ကာလအဘို့အစွန်းရောက် "လူမှုရေးရှုံးနိမ့်" စိတ်ဖိစီးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ကွောငျးကြွက်တွေမှာဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုကိုပြသ optogenetics ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့က VTA အာရုံခံမီး phasically ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ, ဒဏ်ခံတိရိစ္ဆာန်များစိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာပြသသည်။ သူတို့အတူတူပင်အာရုံခံနှုတ်ပိတ်သောအခါ, ဖြစ်ပေါ်နိုင်တိရိစ္ဆာန်များဒဏ်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုနှစ်ခုအရသာဆန့်ကျင်ဘက်အမှုအရာလုပ်နေစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံး VTA အပေါ်သရုပ်ဆောင်နေနှင့်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးချက်ချင်းပြောင်းပြန်နိုင်ပါသည်။ "ဒါဟာတည်ပြီးသတ်တယ်စိတ်ကျရောဂါဖို့ dopamine စနစ်၏အရေးပါမှုထေူ," Yadid ကပြောပါတယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ serotonin-တိုးမြှင်စိတ်မကျဆေး Antidepressants သွယ်ဝိုက် dopamine အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်နေဖြင့်အလုပ်လုပ်သောသံသယရှိ။ သောအမှုဖွင့်လျှင်, တိုက်ရိုက် dopamine ဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားအားကောင်း, ပိုမိုမြန်ဆန်သက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကစက္ကန့်သို့မဟုတ်မိနစ်များ၏နိုင်ရန်အတွက်သက်ရောက်မှုကိုတွေ့မြင်" Tye ကပြောပါတယ်။ "ဒါကကျနော်တို့ချက်ချင်းစိတ်ကျရောဂါ-related လက္ခဏာတွေအုပ်ချုပ်သောတိုက်ရိုက်ဆားကစ်ပစ်မှတ်ထားနေကြသည်ကိုပြောပြသည်။ " နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်ပါကအရေးပါသည်ဟုရုံ VTA မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်နျူကလိယ accumbens NA () မှ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှု။ အဆိုပါ VTA ထံမှ signals ဟာ NA အတွက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အလှည့်များတွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုပါ။
"ဒါကညာဘက်ရှိပစ်မှတ်ရဲ့" Tye ကပြောပါတယ်။ သူမသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်လျှပ်စစ်နှင့်အတူဤ-ဖြစ်စေ circuit ကိုထိန်းချုပ်ထားသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသယ်ဆောင်လိုစိတ်ကျရောဂါ, ကုသ၏ပိုကောင်းနည်းလမ်းများမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြဆွ-နိုင်ကြောင်းမျှော်လင့်ပါသည်။ "ယခုအချိန်တွင်မှာကျနော်တို့တိကျတဲ့ဦးနှောက်ဒေသများပစ်မှတ်ထားကြောင်းမူးယစ်ဆေးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူကစိတ်ကူးစိတ်သန်းကျော်လွန်မဟုတ်ဘူး" ဟုသူကပြောပါတယ်။
ကိုးကား: Tye, Mirzabekov, မှူး, Ferenczi, Tsai, Finkelstein, kim, Adhikari, Thompson, Andalman, Gunaydin, Witten & Deisseroth ။ 2012 ခုနှစ် Dopamine အာရုံခံအာရုံကြော encoding ကနှင့်စိတ်ကျရောဂါ -related အပြုအမူ၏စကားရပ် modulate ။ သဘာဝ။ http://dx.doi.org/10.1038/nature11740
Ku, Koo, ဖာဂူဆန်, Tsai, Pomeran, Christoffel, Nectow, Ekstrand, Domingo, Mazei-Robison, Mouzon, Lobo, Neve, Friedman ။ , Russo, Deisseroth, Nestler & Han တို့ဖြစ်သည်။ midbrain dopamine အာရုံခံထိန်းချုပ်မှုအားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါ -related အပြုအမူ၏ 2012 ခုနှစ်လျင်မြန်စွာစည်းမျဉ်း။ သဘာဝ http://dx.doi.org/doi:10.1038/nature11713
Dopamine အာရုံခံအာရုံကြော encoding ကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ-related အပြုအမူ၏စကားရပ် modulate
ကေးအမ် Tye, ဂျူလီဂျေ Mirzabekov, အမျိုးသမီး Melissa R. မှူး, အမ်မလီအေ Ferenczi, Hsing-ချန် Tsai, ယောလ Finkelstein, Sung-နှာ Kim က, Avishek Adhikari, Kimberly R. Thompson က, အာရုန်သည်အက်စ် Andalman, Lisa ကိုအေ Gunaydin,Ilana ခ Witten& ကားလ် Deisseroth
သဘာဝတရား (2012) Doi: 10.1038 / nature11740
ဒီဇင်ဘာလ 12 online2012 Published
ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါမျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်းနှင့် anhedonia ပါဝင်သည်ကြောင့်မတူကွဲပြား debilitating လက္ခဏာတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်1။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Dopamine အာရုံခံ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9သက်ဆိုင်ရာဖြစ်တွေးဆခဲ့ကြကြောင်းအများအပြားအာရုံကြောလူဦးရေကြားတွင်ရှိပါတယ်10ဆေးဝါးများနှင့်ဦးနှောက်ဆွကုထုံးအပါအဝင်နှင့်အချို့သောလက္ခဏာကုသမှုသည်, ရှုပ်ထွေးသော dopamine system ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ လက်ရှိကုထုံးကြားဝင်အထူးသ dopamine အာရုံခံပစ်မှတ်ထားနိုင်ရင်အဖြစ်ယခုတိုင်အောင်ပင်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်တိုက်ရိုက်ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှမရှိခဲ့ပါ။ ဤတွင်ကျနော်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြွက်ရွေ့လျားအတွက်အမူအကျင့်, pharmacological, optogenetic နှင့် electrophysiological နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်တိုက်ရိုက်နာတာရှည်ပျော့စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင် multidimensional စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့ phenotypes မှသတ်မှတ်ထားသော dopamine အာရုံခံ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပံ့ပိုးမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ bidirectional ထိန်းချုပ်မှု (တားစီးသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှား) ချက်ချင်းနှင့် bidirectionally (သွေးဆောင်သို့မဟုတ်စိတ်သက်သာရာ) modulates ကြောင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မျိုးစုံလွတ်လပ်သောစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤအဆိုးကျိုးများ၏ circuit ကိုအကောငျအထညျဖျောစကားတွေအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဤ dopamine အာရုံခံ၏ optogenetic စုဆောင်းမှုအစွမ်းထက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေထိခိုက်ဖြစ်စဉ်များဟာအာရုံကြောမြားတှငျပွောငျးလဲပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်၏မြစ်အောက်ပိုင်းနျူကလိယ accumbens အတွက်စိတ်ကျရောဂါ-related အပြုအမူတွေများ၏အာရုံကြော encoding ကပွောငျးလဲကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိ limbic circuitry အတွက်လုပ်ဆောင်ချက် encoding က။
အလွန်လျင်မြန်သော နည်းကျအောင်ပြုလုပ်ခြင်း of စိတ်ကျရောဂါ-ဆက်စပ် အပြုအမူတွေ by ထိန်းချုပ်မှု of midbrain dopamine အာရုံခံ.
သဘာဝ. 2012 ဒီဇင်ဘာ 12 ။ Doi: 10.1038 / nature11713 ။ [EPub ရှေ့ဆက်၏ ပုံနှိပ်]
Chaudhury: D, Walsh JJ, Friedman AK, ရေ့စ်ခ, ku သည် SM, Koo JW, ဖာဂူဆန်: D, Tsai HC, Pomeranz L ကို, Christoffel DJ သမား, Nectow AR, Ekstrand M က, ဒိုမင်ဂိုတစ်ဦးက, Mazei-Robison က MS, Mouzon E ကို, Lobo MK, Neve RL, Friedman JM, Russo SJ, Deisseroth K သည်, Nestler EJ, ဟန် MH.
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စနစ်များဟော်မုန်း၏ 1] ဦးစီးဌာန, Friedman ဦးနှောက် Institute မှ, ဆေးပညာသိနာတောင်ပေါ်ကျောင်း, နယူးယောက်, New York က 10029, အမေရိကန်နိုင်ငံ  ။
Ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) dopamine အာရုံခံ လူမှုရေး - စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်အပြုအမူမူမမှန်ဖို့ခံနိုင်ရည်နှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအပါအဝင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက် ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ have ရှိသည်။ VTA dopamine အာရုံခံ အနိမ့်အကြိမ်ရေလုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်နှင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း phasic ပစ်ခတ်ရန်: ပစ်ခတ်ရန်နှစ်ခုအတွက် Vivo ပုံစံများကိုပြသ။ ၏ Phasic ပစ်ခတ်ရန် အာရုံခံကောင်းစွာဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများဝှက်သိသော, ထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုမြင့်မားအတည်ပြု mouse ကိုမော်ဒယ်အားဖြင့် upregulated ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကဒီ pathophysiological အကျိုးသက်ရောက်မှုဒဏ်ခံတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နှုန်းကိုပစ်ခတ်မသိသာပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူသာဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြွက်တွင်တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အထား-in ကိုမှန်ကန်အချိန်-ချိတ်ဆက် dopamine အဆိုပါဖြစ်ပေါ်နိုင် (စိတ်ကျရောဂါ-လိုမျိုး) phenotype မြှင့်တင်ရန်အတွက်အာရုံခံဆဲလျ phasic ပစ်ခတ်ရန်ချို့တဲ့နေပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကယာယီတိကျစွာ၏အားသာချက်ကို ယူ. optogenetics ၏ဆဲလ်-type နှင့် Project-လမ်းကြောင်းတိကျတဲ့ထိုအကြောင်းပိုမို phasic ပစ်ခတ်ရန်ပြသနိုင်ဖို့ အာရုံခံ လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူအတွက်လူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက် mediates ။ ကျနော်တို့ VTA အတွက်ပစ်ခတ်သော optogenetic phasic ၏ induction, ဒါပေမယ့်မရလုပ်သူများကိုပြသ dopamine အာရုံခံ တစ်ဦး subthreshold လူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်ပါရာဒိုင်းလျှက်ကြွက်၏လျှင်မြန်စွာလူမှုရေးရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နိုင် phenotype သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် sucrose preference ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ ဤအရာ Optogenetic phasic ဆွ အာရုံခံ လည်းလျင်မြန်စွာထပ်ခါတလဲလဲလူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းမဲ့ခဲ့ယခင်ကဒဏ်ခံကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင် phenotype သွေးဆောင်။ ထို့အပွငျ, ငါတို့စိတ်ဖိစီးမှုလွယ်ကူစွာထိခိုက်မြှင့်တင်ရန်အတွက် Project-လမ်းကြောင်းတိကျတဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသ: VTA ၏ phasic activation အာရုံခံ လူမှုရေး-ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်သွေးဆောင်ခြင်း, နျူကလိယ accumbens (NAc) အား, ဒါပေမယ့်မ medial prefrontal cortex (mPFC) မှထုတ်လုပ်တဲ့။ အဆိုပါ VTA-NAc projection သွေးဆောင်ခံနိုင်ရည်၏ပြောင်းပြန် optogenetic တားစီး, အ VTA-mPFC စီမံကိန်း၏တားစီးလွယ်ကူစွာထိခိုက်ရာထူးတိုးသော်လည်း။ ယေဘုယျအားဤလေ့လာမှုများဝတ္ထုပစ်ခတ်ရန်-pattern- နှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏အာရုံကြော-circuit ကို-တိကျတဲ့ယန္တရားများထုတ်ဖေါ်။